Yusuf Garaad: Afar iyo Bar
Ethiopia isla goobta ayay markiiba ka sheegtay in ay taageersan tahay shirka ay Djibouti u qabaneyso Soomaalida. Shirka Golaha Guud ee QM ee 1999 waxaa Ethiopia matalayay wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda, Seyoum Mesfin. Khudbaddii uu akhriyay Wasiirku wuxuu ku sheegay in Ethiopia ay taageersan tahay Shirka Soomaalida ee ay Djibouti ay ku dhawaaqday.
Warkaan waxaan marka hore ka helay ilo sare oo Ethiopian ah, maalmo ka dibna xeyndaabyo Djibouti ah ayaa la iiga qiray xogta aan Addis Ababa ka soo helay.
Geelle wuxuu halkaa Zenawi ugu ballan qaaday in si siman ay wax u heli doonaan qabaa'ilku.
Maaddaama maalmahaan ay dhinacyada qaar ka dhawaajiyeen in ay rabaan in laga guuro 4.5, dhinacya kalena ay ku dheggan yihiin waxaa igu dhashay su'aalo badan. Marka aan ka fekerayo jawaabaha su'aalaha igu dhashay, waxaan rabaa in aan kor u fekero si aad ii maqasho oo fikir aan isugu darsanno. Maanta waxaan dhiraandhiriyey halka lagu go'aamiyey in si siman wax loo qeybsado. Qormooyin kale ayaa xigi doona.
Posted by Yusuf Garaad at 00:01:00